သတို့သမီးရဲ. အဝတ်အစားတွေကို ဧည့်သည်အမျိုးသား နှစ်ဦးက ဝိုင်းချွတ်တာကို ရီမောနေတဲ့ သတို့သားဗီဒီယို ရေပန်းစားနေ | Buzzy
ဘရာနဲ့ ပန်တီပဲ ကျန်တော့တယ် သတို့သမီးက :O
လက်တလော တရုတ်နိုင်ငံရဲ. ဗီဒီယို ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Miaopai မှာ သတို့သမီးရဲ. သတို့သမီးရဲ. အဝတ်အစားတွေကို ဧည့်သည်အမျိုးသား နှစ်ဦးက ဝိုင်းချွတ်တာကို ရီမောနေတဲ့ သတို့သား ဗီဒီယို ရေပန်းစားနေပါတယ်။
လကျတလော တရုတျနိုငျငံရဲ. ဗီဒီယို ဝကျဆိုဒျတဈခုဖွဈတဲ့ Miaopai မှာ သတို့သမီးရဲ. သတို့သမီးရဲ. အဝတျအစားတှကေို ဧညျ့သညျအမြိုးသား နှဈဦးက ဝိုငျးခြှတျတာကို ရီမောနတေဲ့ သတို့သား ဗီဒီယို ရပေနျးစားနပေါတယျ။
ဒီဗီဒီယိုကတော့ တရုတ်ကြင်စဦးစုံတွဲတစ်တွဲရဲ. မင်္ဂလာအခမ်းအနားအပြီး သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး အိပ်ယာပေါ်မှာ စောင်ခြုံလှဲလှောင်းနေစဉ် ဖြစ်ပွားတာကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီထဲမှာတော့ သူစိမ်းအမျိုးသားနှစ်ဦးက သတို့သမီးခြုံထားတဲ့ စောင်ကို လှမ်းဆွဲပြီး ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတာပါ။
ဒီဗီဒီယိုကတော့ တရုတျကွငျစဦးစုံတှဲတဈတှဲရဲ. မင်ျဂလာအခမျးအနားအပွီး သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး အိပျယာပျေါမှာ စောငျခွုံလှဲလှောငျးနစေဉျ ဖွဈပှားတာကို ရိုကျကူးထားတာပါ။ ဒီထဲမှာတော့ သူစိမျးအမြိုးသားနှဈဦးက သတို့သမီးခွုံထားတဲ့ စောငျကို လှမျးဆှဲပွီး ကိုယျလုံးတီးဖွဈအောငျ ကွိုးစားနတောပါ။
ဒီလုပ်ရပ်ကို သတို့သားဖြစ်သူကလည်း စိတ်ဆိုးဟန်မရှိပဲ ရီမောနေခဲ့ပါတယ်။ စောင်ကွာသွားချိန်မှာတော့ သတို့သမီးဟာ ဘရာနဲ့ ပန်တီလေးပဲ ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သတို့သမီးဖြစ်သူဟာလည်း ရီမောနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလုပျရပျကို သတို့သားဖွဈသူကလညျး စိတျဆိုးဟနျမရှိပဲ ရီမောနခေဲ့ပါတယျ။ စောငျကှာသှားခြိနျမှာတော့ သတို့သမီးဟာ ဘရာနဲ့ ပနျတီလေးပဲ ရှိတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ သတို့သမီးဖွဈသူဟာလညျး ရီမောနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ဂိမ်းကစားနေတာလား ၊ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတာ သေသေချာချာ မသိရပေမယ့် တော်တော်လေးကို ရုပ်ဆိုးတဲ့ ဖြစ်ရပ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
ဒီလုပျရပျဟာ ဂိမျးကစားနတောလား ၊ ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတာ သသေခြောခြာ မသိရပမေယျ့ တျောတျောလေးကို ရုပျဆိုးတဲ့ ဖွဈရပျလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။